Rita, Writing for My Sake!: ဘီအိုဘီအို ဟု ခေါ်ပါသည်
Posted by Rita at 10/10/2010 11:33:00 AM
ဖဘမှာ သူ့နာမည်တွေ့နေတာ ကြာပြီ။ စိတ်မကောင်းစရာ ကိုယ့်အသိတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးတော်နေတယ်။
How could you sure say that name(Bo Bo )was Bo Bo Lann Sin? Even if he was Bo Bo Lann Sin, you should have not mentioned his old generations. That was totally inappropriate.
မရီတာရေ ဆူးတွေပါတဲ့ လှည်းပိုစ့်ကို ဖတ်တာနောက်ကျလို့ အမပိုစ့်အသစ်တင်ပြီးမှပဲ မန့်လိုက်ရတယ်။ ဆူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာလေးဖတ်မိပြီး ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ၇တန်းတုန်းက ငါသေရင်တောင် ငါးဇင်ရိုင်းလို ဆူးတောင်ကားပြီးသေမယ်ကွဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကို နောက်ပြောင်ပြီး စပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ခပ်ပေါပေါ ခပ်ညံ့ညံ့ ကဗျာလေးပါ..နောက်ဆုံးက ငါရယ်ချင်ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အဲ့ဒီတုန်းက အို...ဆူးရှင်။ ဆိုပြီးရေးခဲ့တာ။ ခုတော့ တိုက်ဆိုင်သွားမှာဆိုးလို့ ပြောင်းရေးလိုက်တယ်။
ဟုတ် မဟုတ် ဆိုတာ အရင်ဆုံး သေချာ confirm နေရလို့ ဒီနေ့မှ တင်ရတာပါ။
လူတစ်ယောက်ကို မကျေနပ်တာနဲ့၊ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုး သူလုပ်တာနဲ့ တခြား မဆိုင်သူ (သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း) ကို ထိခိုက်ဆွဲထည့် ပြောတာမျိုးကို ကိုယ်လည်း မနှစ်သက်ပါဘူး။ nar ဒီလို လာမေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုပြန်ရေးလို့ ရတာဖြစ်လို့ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်ကနေ သူဆင်းသက်လာတဲ့ တဆွေလုံး တမျိုးလုံးကို တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့အကျင့် ကိုယ့်မှာ မရှိအောင် သတိကြပ်ကြပ်ထားပါတယ်။ အရင်ပို့စ်မှာတောင် ကွန်မန့်ရေးသူတစ်ယောက် ဒီလို ဆွဲထည့် ထိခိုက်စေလို့ ကိုယ် ပြန်ရေးခဲ့ရသေးတယ်။
ခုလည်း မဆိုင်သူတွေကို ထိပါးစော်ကားတဲ့ စကားလုံးမျိုး မပါအောင် ကိုယ်သတိထားရေးပါတယ်။
ဒီ post ကို လက်တုန့်ပြန်တဲ့ post လို့ ပြောမယ်ဆို ပြောနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုတောင်မှ ထိပါးစော်ကားတဲ့ ရင့်ရင့်သီးသီး စကားလုံး မပါအောင် အထူး သတိထားခဲ့တယ်။
သွားလေသူတွေကိုရော၊ ရှိနေသေးသူတွေကိုရော ထိခိုက်လိုတဲ့စိတ် မရှိပါဘူး။ ဘာလို့ သူ့ ဆင်းသက်လာရာကို ဖော်ပြသလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးမို့ကို ကိုယ်က အရေးတယူ ကိုယ့် ဘလော့ပေါ်တင်တာဖြစ်လို့ပါ။ အဲဒီဘလော့မှာ ဘလော့ပိုင်ရှင် အပါအဝင် ကိုယ့်ကို ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းတဲ့ လူတွေ နောက်ထပ် ရှိနေတာပဲ။
ဘလော့ပိုင်ရှင်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောရမယ့်သူ ဖြစ်တာမို့ မေးလ်ကနေပဲ တိုက်ရိုက်ပြောတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ ကိုယ်နဲ့လည်း မသိ၊ ကိုယ်လည်း သူတို့ တိုက်ရိုက်စကားဆိုစရာမရှိတော့ ဘာမှလည်း စိတ်ထဲ မရှိဘူး။
ဒီ comment ရေးဖြစ်လို့ nar ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကံဆိုးပြီး အဲလိုယောက်ပြားတွေ လက်ထဲများ ဗမာပြည်ကြီးရောက်သွားလို့ကတော့နော်.......... နောက်လာတဲ့မောင်ပုလဲလိုဖြစ်သွားမယ်။
sorry PA & nar
ညက PA နဲ့ nar ရဲ့ 2nd comment ကို မတွေ့ဘဲ ကျော်သွားလို့ publish မလုပ်လိုက်ရဘူး။ ခုမနက် comment moderation ဝင်ကြည့်မှ တွေ့မိလို့။ အဲဒါကြောင့် PA ပြောတာကို အဆက်အစပ်မမိလိုက်တာ။
မတွေ့တာ ကြာပေါ့ ဒေါ်ရီတာရေ.. ။ ကျုပ်ကွန်းမန့်ကိုလည်း ခင်ဗျား အပရု မလုပ်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် ရေးတော့ ရေးလိုက်ဦးမယ်ဗျို့။ ခင်ဗျား မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တုန်းက ကျုပ်မရှိလို့ပေါ့ဗျာ။ နို့မို့.. နဖူးတိုက် ဒူးတိုက်ပြီး လည်ပင်းညှစ်ကြေး ဆွေးနွေးချင်သေးတယ် ခင်ဗျားရဲ့ အိုင်ဒီယိုလော်ဂီတွေကို..။
အရင်ဆုံး profile အမှန်လေးပဲ ပြလိုက်ပါဦး
>>>>အရင်ဆုံး profile အမှန်လေးပဲ ပြလိုက်ပါဦး <<<<
ဟား..ဟား.... ရီတာ့ကွန်မင့်ကို ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။ အိုင်ဒီအမှန်တောင် မပြရဲဘဲနဲ့ နဖူးတိုက် ဒူးတိုက် လည်ပင်းညှစ်ကြေး ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရဲတဲ့ သတ္တိကိုတော့ လက်ဖျားခါသွားပါတယ်။ (မစင်ကိုင်မိလို့း-)။
မြေးဖြစ်သူ ဘိုဘိုလန်းစင် ပါးစပ်က ဒါမျိုးတွေ ထွက်တယ်ဆိုတာကို လူငယ်တွေ လိမ္မာရေးခြားရှိဖို့ “အမေ့ရှေးစကား”တွေ စေတနာရှေ့ထား ရေးသားခဲ့တဲ့ အဖွားလုပ်သူ လူထုဒေါ်အမာကြီး ကြားမသွားရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။။ (ပြောသာပြောရတာ၊ လူထုဒေါ်အမာကို အမေ့ရှေးစကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကျနော်လည်း သိပ်မကြိုက်ဘူး။း-)။ အမေ့ရှေးစကားမှာ ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ရေးသားထားတာနဲ့ ဆယ့်နှစ်ပွဲဈေးသည်က ဆေးမင်ကြောင်ကိစ္စမှာ ရေးထားတာတွေဟာ စကားရှေ့နောက်မညီ ကွဲလွဲနေတာလေးတွေကိုလည်း သတိပြုမိတယ်။ နောင် အလျဉ်းသင့်တော့မှ ရေးပြဦးမယ်။)
Those were rude and uncivilized words, those ppls are might be good enough IQ but lack of EQ controls.
I noted some plain words of Sayagyi Shwe U Daung in his A life's chronicles book thatafull moon face of U Hla was becameasmall bum (Monk Lay Pway) when raided by army to their press.
ကိုယ်လည်း ချိုသာ သိမ်မွေ့ ယဉ်ကျေးတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို လာရင့်ရင် ကိုယ်လည်း ပြန်ရင့်တတ်ပါတယ်။ သိပ်လည်း စွာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မင်း နားလည်ရဲ့လား သဘောမျိုးနဲ့ လာလုပ်ရင် ကိုယ်လည်း ပြန်လုပ်တတ်ပါတယ်။
လာရိတာမျိုးကတော့ စာရင်းမရှိပါ။ လာ ရိတဲ့လူရဲ့ မြားကို သူ့ဘက် ပြန်လှည့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။
နောက်တမျိုးကတော့ ကိုယ်က publish ကို ပြထားတဲ့ မမKOM ရဲ့ cbox မှာ စကားပြောတတ်တော့ အဲဒီမှာ အမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ ဘလိုင်းကြီး လာခွပ်တာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကတော့ စာရင်းမရှိပါ။ သူတို့ ပြောလိုက်ရင် ကိုယ်လို ငစွာက ဆတ်ဆတ်ခါပြီး ပြန်တုန့်ပြန်မှာပဲ အထင်နဲ့ လုပ်တာမို့ သူတို့ စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲ ပြန်ပြောပေးလိုက်တတ်တယ်။ သူတို့ မျှော်လင့်တာ လုပ်မပြချင်လို့ပါ။ စိတ်ကောင်းထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဥပမာ - ခု ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ထိခိုက်ပြောတာမျိုးပေါ့ (တကယ်တမ်း ကိုယ် ခု ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ သေချာသိတာလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လေဖမ်းဒါန်းစီးပြောတာ။ သူပြောရင် နာမလားဆိုပြီး)။ ဒါမျိုးကတော့ စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲ ထားပေးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ် လို့ပဲ သံယောင်လိုက်ပေးလိုက်တယ်။ စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးရောလေ။ ရွဲ့တယ်လို့လည်း ပြောနိုင်တယ်။
ထပ်ဆင့် ဥပမာ ပေးရရင် ဆူး ကဗျာမှာ phyoaung လာပေးတဲ့ ကွန်မန့်ကို တုန့်ပြန်သလိုမျိုး။
nyo လို comment မှာ လာမချပေမဲ့ ဒီ post တင်ပြီး မေးလ်တော်တော်များများ ရခဲ့တယ်။ သူတို့လည်း nyo ပြောသလို မထူးဆန်းဘူး ပြောတာပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီလင့်ခ်ကိုပဲ ပေးတဲ့ နောက်တယောက်တောင် ရှိသေးတယ်။
အထက်မှာ ဥပမာတွေ ထုတ်ပြတာပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ချေငံပြေပြစ်သူ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုတွေ တန်ပြန်တတ်တယ် ဆိုတာကို။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မူက လက်တုန့်ပြန်တဲ့မူ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ကို စထိလာမှ ပြန်တတ်တဲ့သူ။
သူများဘလော့မှာ ဝင်ပြောမယ်ဆိုရင်တောင်မှ မူရင်းစာရဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပဲ ဝင်ပြောတယ်။
ဥပမာ ကိုပေါ ဘလော့မှာ ကိုပေါကို ကွန်မန့်လာပေးသူတယောက်ယောက်နဲ့ ကိုယ် ဝင်ပြောမယ် ဆိုပါတော့။ ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်တာသာ ငြင်းချင်ငြင်းမယ်။ ကိုပေါ ပြောဆို ငြင်းခုံထားတာတဲ့ အချက်အလက်ကို ကိုးကားချင်ကိုးကားမယ်။ ကိုပေါ နှိပ်ကွပ်လိုက်တာကိုတော့ ကောင်းလိုက်တာလို့ ဘေးကနေ ဆွမ်းကြီးလောင်း ကောင်းချီးမပေးဘူး။ (မှတ်ချက်။ ဥပမာ ဖြစ်သည်)
ဇီဇဝါမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကျတော့ အတော်ကို ရုပ်ပျက်သွားပြီ။ ကိုယ်နဲ့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြားမှာ လွဲသွားတဲ့ အချက်တွေ ရှိတယ်။ (ကိုယ်တို့ချင်း မေးလ်နဲ့ ရှင်းပြီးသား)
အဲဒီမှာ ဝင် ဆွမ်းကြီးလောင်းတဲ့ တချို့ သံယောင်လိုက်တာက ကိုယ်က ဖလော်ကို မသိဘဲ၊ မတတ်ဘဲ၊ နားမလည်ဘဲ တတ်ယောင်ကားဝင်လုပ်တယ်ဆိုတာ။
သေချာဖတ်ကြည့်ရင် အရှင်းကြီး။ ကိုယ့် ပထမဆုံး ကွန်မန့်မှာ တခြားဟာတွေ ကျော်ဖတ်သွားတယ်။ လောလောဆယ် ကိုယ်တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာ (ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာ ဆိုတဲ့ post) နဲ့ ဆိုင်တာလေးတစ်ခု တွေ့လို့ အဲဒါကို ဆွဲထုတ်ပြောပါတယ် ဆိုတာ...
အဲဒီမှာ ကျော်ဖတ်ပါတယ် အတိအလင်း ရေးထားရက်နဲ့ နားမလည်ဘဲ ဝင်ပြောတယ်ဆိုတော့ကာ... မဖတ်မိတဲ့ စာကို ဘယ်လို နားလည်မှုလွဲရမလဲ။ လွဲစရာကို မရှိတာ။ ရှင်းနေတာပဲ။
အဲဒီက ဘလော့ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ကိုယ့် လေသံ အသုံးအနှုန်းပေါ်မှာ အထင်အမြင် တစ်ခု ရှိနေတာ သိလို့ အဲဒါကို သူနဲ့ တိုက်ရိုက်ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဟိုပုဂ္ဂိုလ် ကဏ္ဍ ပါလာပြီ။
ခုဟာက ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းချင်တာ သက်သက်။ ဒါ ရင့်သီးတာလို့ ပြောလို့မရဘူး ယူဆမိတယ်။ လူတယောက်က တခြားလူတယောက်ကို ရင့်သီးနေတာကို ကြားဝင် အားရတာ၊ ခံရတဲ့လူကို ခံသွားရပြီဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုး အားရတာ။
တပါးသူ နှိပ်ကွပ်နေတာကို သူလုပ်နေရတဲ့အတိုင်း ဘေးကနေ ဩဘာပေး အကုသိုလ်ယူတာ၊ သူတပါးနှိပ်ကွပ်ခံရတာကို သူလုပ်လို့ ခံရတဲ့အတိုင်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာ။
သူ့ထိလို့ တန်ပြန်တာ မဟုတ်ဘဲ သူတပါးကို သိက္ခာမှ ကျပါစေတော့လို့ ဘေးကနေ ဟေးတိုက်လို့ မောင်းချင်တာ။ အားပေးအားမြှောက်ပြုချင်တာ။ အဲလိုလုပ်လိုက်ရင် ခံရတဲ့လူက ကြောက်သွားမယ်ထင်ပြီး နှစ်သိမ့်အားရနေတာ။ သူတပါး အကြောက်ကို အရသာခံ ကြည့်ချင်နေတာ။
အဲဒါ ကိုယ့်တွက်တော့ မှတ်တမ်းတင်စရာ အချက်ပဲ။ ဒီစိတ်ဓါတ်အတိုင်းနဲ့ နောင်တချိန် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်မလာဘူး မပြောနိုင်ဘူး။ ကိုယ်တွေလို အပျော်တမ်း ဘလော့ဂါလုပ်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးနော်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကို သူ့စိတ်ကြိုက် အဂတိနဲ့ ပုံမဖော်ဘူး မပြောနိုင်ဘူး။
nyo ပြောချင်တာ နဲနဲပေမယ့် ကိုယ်က ပြောချင်တာတွေ များသွားတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီမှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုတာ စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်တယ်လို့တော့ မပြောလိုပါ။ ဒါ လက်တုန့်ပြန်တာသက်သက်လို့ ကိုယ်ပြောပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ထိလို့ တန်ပြန်တာ မဟုတ်ဘဲ သူတပါးကို သိက္ခာမှ ကျပါစေတော့ ((( လိပ်ပြာမှ ငယ်ပါစေတော့ )))) လို့ ဘေးကနေ ဟေးတိုက်လို့ မောင်းချင်တာ။
((())) ထဲက စာသားလေး ဖြည့်ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျန်သွားလို့။
မမKOM ရဲ့ cbox မှာ ပြောဖြစ်ထားတာတွေ။
reader: မင်းကို ဘိုဘို အီးမေးလ်ပို့ ပီးမဆဲဘူးလား။ သူက အဲလိုလည်း လုပ်တတ်တယ် တခါတလေ ပါ။ သူများပြောတာကြားဖူးတာ
RITA: ခုထိတော့ မလာသေးပါဘူး။
reader: :D :D
RITA: ဒါနဲ့ ရီဒါ။ အဲဒီမေးခွန်းလေး မှတ်ထားလိုက်တယ်။ နောင် ပြန်တင်ဖြစ်ရင် အထင်အမြင်လေး တခုအနေနဲ့ ပြန်တင်ပေးမလို့။ ((( မင်းကို ဘိုဘို အီးမေးလ်ပို့ ပီးမဆဲဘူးလား။ သူက အဲလိုလည်း လုပ်တတ်တယ် တခါတလေ ပါ။ သူများပြောတာကြားဖူးတာ )))ဆိုတာလေး
reader: :O မလုပ်ပါနဲ့။ မကောင်းပါဘူးထင်တယ်။ ဒီမှာက ID မဖော်ပဲအလွတ်သဘောပြောနေတာ။ :D
RITA: ကိုယ့်ဆီကို မေးလ်တွေ စုံနေအောင် ရောက်တယ် အထင်အမြင်တွေ။ စုထားပြီး သင့်မယ် ထင်တာကို ပြန်တင်ပေးမလို့။ ID ဘာလုပ်မှာလဲ။ ပြကြရင်တောင် ချန်ထားပေးရမှာ မဟုတ်လား ကိုယ့်အနေနဲ့။ လုပ်ချင်မှလည်း လုပ်ဖြစ်မှာပါ အခြေအနေအရ။
RITA: လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ ဒီတခါ ဘီအို ဘီအို မဟုတ်တော့ဘူး။ နာမည်ရင်းနဲ့ပဲ ချတော့မယ်။
reader: ဒါဆိုရင် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပို့စ်လေးတွေ မင်းဘလော့မှာ စောင့်ဖတ်ရဦးမယ်။:)
reader: 'ရေးပါ။ဖတ်ရတာပေါ့။ သမားရိုးကျအကြောင်းအရာတွေပျင်းနေပြီ။
RITA: မလုပ်လို့ မရဘူး ရီဒါ။ ဘာလို့လဲ သိလား။
တခြားလူ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်း မျိုးရိုးတွေ ရှိတဲ့လူ။ ခုလောလောဆယ် သမိုင်းကို လုပ်နေတဲ့လူ။ ပြောမရဘူး နောင်တချိန် နိုင်ငံရေး လုပ်ချင် လုပ်မယ့်လူ။ မလုပ်သည့်တိုင်အောင် ဗမာပြည်သမိုင်းကို ဝင်စွက်မယ့်လူ။ အဲဒါကြောင့် လုပ်သင့်တယ် လို့ ယူဆတယ်။
သူ့ကို ကိုယ် အာဃာတ မရှိဘူး မပြောပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ဘလော့မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့ အာဃာတနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ။ လုပ်ဖို့ ကောင်းတယ် ထင်လို့ လုပ်မယ့် ကိစ္စ။
reader: ကိုယ်တော့ သူနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ရမယ်လို့ ထင်ကိုမထင်တာပါ။ စာရေးလည်း သိပ်တော့မကောင်းလှဘူး။ ဟေးးကိုယ်ပြောနေတာတွေ မင်းပြန်မရေးနဲ့ ဦးနော်။ :D
RITA: reader: ကိုယ်တော့ သူနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ရမယ်လို့ ထင်ကိုမထင်တာပါ။ )) နိုင်ငံတကာစံနဲ့တော့ မကြည့်နဲ့လေ ရီဒါ။ ဗမာပြည်လို ခေတ်အဆက်ဆက်ပျက်နေတဲ့နေရာမှာတော့ ဒီလိုလူမျိုး နေရာ ရရင်လည်း ရနိုင်တာပဲ။
reader: ဒါပေမယ့် သူသည် လူထုမြေးဖြစ်နေတာတခု က သူ့အားသာချက်ပေါ့။ ဗမာစံနဲ့ လည်းကိုယ်မထင်ဘူး။
RITA: reader: ဟေးးကိုယ်ပြောနေတာတွေ မင်းပြန်မရေးနဲ့ ဦးနော် )) ပြန်ရေးမှာပါ ဆိုနေမှပဲ
reader: လူထုမြေးဆိုပေမယ့် အောင်ဘာလေ လည်း စလုံးမှာရှိတာပဲ။ သူကတော့ အဘိုးအဘွားလောင်းရိပ်မှာမနေဘူး။ ဘို တို့ကတော့ အဘိုးအဘွားအရှိန်အ၀ါကိုအပြည့်အသုံးချတယ်။
reader: ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်ရပ်မှပဲ။ စကားပြောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့။ :D
reader: ခုခေတ်ကြီးက အလကားပါ။ ကိုယ်တော့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုရှာ၊ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုပဲအထင်ကြီးတော့တယ်။ ဗမာပြည်အသုံးချပီးလုပ်စားနေတဲ့သူတွေကလည်းအများသား အော်ဂလီဆန်စရာ။ english speaking ကောင်းတာလောက်လေးနဲ့ ဟီးရိုးတယောက်လိုဝိုင်းမပေးနေတဲ့ငကြောင်တွေကိုလည်း ကြည့်ရတာအကုသိုလ် များတယ်။
RITA: reader: ဘို တို့ကတော့ အဘိုးအဘွားအရှိန်အ၀ါကိုအပြည့်အသုံးချတယ်။ )) အသုံးချနိုင်တယ် မချနိုင်တယ် ဆိုတာကတော့ သူ့ကုသိုလ်နဲ့ သူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ အသုံးချတယ်ဆိုတာထက် အိုးမဲသုတ်တာ ပိုများနေသလိုပဲ။
RITA: reader: english speaking ကောင်းတာလောက်လေးနဲ့ ဟီးရိုးတယောက်လိုဝိုင်းမပေးနေတဲ့ငကြောင်တွေကိုလည်း ကြည့်ရတာအကုသိုလ် များတယ်။ )) အင်း ရီဒါ့ကြည့်ရတာ ကိုယ့်ထက်တောင် သူ့အကြောင်း ပိုသိသေးတယ်။ ကိုယ့်မှာ ကွန်ဖမ်းလိုက်ရတာ နှစ်ရက်လောက်။ သူမှန်း သိပေမယ့် သေချာမှ ဖြစ်မှာကိုး။
reader: English speaking က ဟိုကလေးမကိုပြောတာကွ။ ဘိုက အဲလောက်မကောင်းလှပါဘူး။
RITA: ဒါပေမဲ့ ဒီစီဘောက်က လူတွေကိုတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒီစီဘောက်မှာ ကိုယ်ခံလိုက်ရပြီ ထင်ပြီး ဘဘလစ လို ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းချင်တဲ့ဟာ တယောက်ပဲ ပါတာ။
reader: ကိုယ်က စပီကင်း ကောင်းတဲ့သူတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတခုထဲနဲ့ နိုင်ငံကိုကယ်တင်နိုင်မယ့်ပုံမျိုးဝိုင်းပင့်နေတာမကြိုက်တာ။ ဟိုကလေးမလေး ကိုကြည့်။ ဗမာတွေ အင်္ဂလိပ်လိုအပြောကောင်းတာသဘောကျတာနဲ့ ဟီးရိုးကြီးဖြစ်လို့ ။ တကယ်တော့ သူပြောတဲ့စကားတွေထက် သူ အင်္ဂလိပ်လိုအပြောကောင်းတာသဘောကျတာ ခပ်များများပဲ။ အန်တီချမ်း (Addy Chen) ရေးတဲ့ပို့စ် ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တယ်။ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ထပ်တူပဲ။
RITA: ရီဒါ ရှိသေးလားတော့ မသိဘူး။ ပြောချင်တာ ရှိနေလို့။ ဖတ်သွားပါဦး။ အဲဒီဟာသာ msg ပို့ပြီး ကိုယ့်ဆဲလို့ကတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ။ ဒါလောက်တော့ သူတွေးနိုင်လို့ ဖြစ်မယ်။
reader: :) ရှိတယ် ဒီနေ့ အားနေလို့ ဒီထဲဝင်ဖတ်ကြည့်နေတာ။
RITA: အဲလို လာလုပ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့ ရီဒါပြောမှ ဖြစ်မိတယ်။ အကောင်းဆုံးသက်သေလေ။
reader: အဲဒါဆို နောက် interesting postတခုထပ်ရတာပေါ့ ဟုတ်လား ? :D
RITA:တကယ်တမ်း သူမပါရင် ကျန်တဲ့လူတွေက ရေးလောက်စရာမှ မဟုတ်တာ။ ကဝတနဲ့ ကိုလည်း မေးလ်နဲ့တင်ပြီးသွားမှာ။ သူ ဝင်လာတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရဦးမလိုလို ရှိတယ် (တကယ်မတင်ပါ သဘောပြောတာ)
He'd rather to be scolar (FB).
ဘိုဘို၊ ရီဒါ၊ မန္တလေးယူနီဗာစီတီကောလိပ် (ကွဲပြားနေသော တက္ကသိုလ်အသီးသီးကို မူလတက္ကသိုလ်ကြီးများအလိုက် ပြန်စုစည်းရန်)
I do appreciate new generation's capacity for homeland, asamotto "we make difference with together".
ဟဲ့ ဟဲ့ သောက်ပလုတ်တုတ်
ကျုပ်က ဘယ်ကနေ ပါလာရတာလဲ
မလုပ်ပါနဲ့ မမရီတာ နဲ့ ကိုကိုရီဒါ(လေသံဖြင့် မှန်းကြည့်သည်)နေတတ်သလိုပဲနေပရစေ
reader: အမှန်တော့ ကိုယ်ပြောတဲ့ကိုယ့်ထမင်းကိုရှာစားဆိုတာ က ဥပမာကွာ-စလုံးမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ UK . US...bla bla မှာလုပ်နေတဲ့သူတွေယှဉ်ကြည့်။ ဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်စားနေရင်း နိုင်ငံရေးကိုတတပ်တအားလုပ်နေရတာ။ ဟိုမှာလုပ်နေကြတဲ့သူတွေက (အားလုံးကိုမဆိုလို) သူတို့ကို support လုပ်ပေးနေတဲ့ organizations တွေအများကြီး။ တချို့ကနိုင်ငံရေး၊တိုင်းရေးပြည်ရေးခုတုံးလုပ်ပီး အဲဒါနဲ့ လုပ်စားနေကြတာ။ အဲဒါမျိုကို ကိုယ်အထင်မကြီးဘူး။
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ဘာကိုမှမမှီခို၊အသုံးမချ( အဓိကတော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြပဲ) ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားနေတဲ့သူတွေပဲအထင်ကြီးတယ်။ ဘယ်သူအထင်ကြီးကြီးမကြီးကြီးပဲ။
RITA: ရီဒါ ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာ ကိုယ်သိပါတယ်။ ရီဒါပြောချင်တဲ့ point ကို ကိုယ်သိတယ်။ သိတယ်ဆိုတာလည်း တော်လို့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီနေရာမှာ အတွေးချင်း တူနေလို့။
RITA: အဲဒီနေရာလေးတော့ ကွက်ပြီး တင်လိုက်ပါရစေ။ ကွန်မန့်မှာ။
reader: ရပါတယ် ;)
reader: ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်စားရတဲ့နိုင်ငံ၊ အာပလာတွေနဲ့လျှောက်အာလို့မရတဲ့နိုင်ငံ၊ အင်မတန် စက်ရုပ်ဆန်တဲ့စလုံးလိုနိုင်ငံမှာနေရလို့များ ကိုယ်တို့အတွေးတွေတူနေကြသလား ?